प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको इन्चार्जमा डिएसपी दानबहादुर मल्ललाई सरुवा गरेको छ । उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का पिएसओका [पूरा पढ्नुहोस्]
गत मंसिर १० र २१ गतेको चुनावका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरी घरदैलोमा गएर भोट मागेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफूलाई आगामी पाँच [पूरा पढ्नुहोस्]
सन् २०२० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताअनुरुप नतिजा हासिल गर्नु चुनौतीको विषय रहेको छ। बालविवाह अपेक्षित रूपमा न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन। बरु, बहुआयामिक समस्याका रूपमा [पूरा पढ्नुहोस्]
चुनाव सकिएपछि धेरै साथीहरूले मलाई काठमाडौँ जान दबाब दिइरहेका थिए । ‘नेताहरूलाई भनसुन गर् चलखेल थुप्रै हुन्छ रे’ भन्दै । त्यसलाई थेग्न नसकी मैले सदरमुकाम छोडे पुस ४ गते । साथीहरूलाई [पूरा पढ्नुहोस्]
नेपालमा कुनै बेला गाउँफर्कले प्रतिनिधि छान्ने गर्दथ्यो र पञ्चायत मार्फत शासन गर्ने श्री ५ को इच्छा मुताविक छानिन्थ्यो । त्यतिबेला शर्त राजा शासन पूरै सहयोग गर्ने हुन्थ्यो । तर, सामान्य [पूरा पढ्नुहोस्]
भाइ प्रकाश, तिमीले हामीलाई अनि यो धराधाम छोडेको गएको पनि केही दिन भैंसकेको छ । यी दिन पनि स्वर्णिम सपना झैं भएर बित्दैं छन् । कयौं पटक तिमीलाई फोन गर्न मोबाइलमा नम्बर डायल गरे । हामीलाई त [पूरा पढ्नुहोस्]
अह ! हैन, नमस्कार ! खुसी छु । हजुरहरुको विजयको दिन छिटै आउँदै छ । आशा धेरै अनि विश्वास निकै कम छ । हजुरहरुका विगत कोट्याउँदा, जनताले खासै अपनत्व ग्रहण गरेका छैनन् । किनकी युद्धका डोबहरु अझै [पूरा पढ्नुहोस्]